Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa hayada UNICEF ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta ugu qabtay gudiyada xaafadaha dagmada Odweyne. si kor loogu qaado aqoonta iyo awooda gudiyada ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda caruurta. – MESAF
News & Events News Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa hayada UNICEF ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta ugu qabtay gudiyada xaafadaha dagmada Odweyne. si kor loogu qaado aqoonta iyo awooda gudiyada ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda caruurta.
Wasaaradda shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoyska jamhuuriyada Soomaliland oo kaashanaysa hayada UNICEF ayaa tababar ku saabsan ilaalinta xuquuqda caruurta ugu qabtay gudiyada xaafadaha dagmada Odweyne.
si kor loogu qaado aqoonta iyo awooda gudiyada ka shaqeeya ilaalinta xuquuqda caruurta.